မလိုလားအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုရှင်းရင်း စက်ပေါ့ပါးအောင်လုပ်နည်း (ဆော့ဝဲမလိုပါ) - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
မလိုလားအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုရှင်းရင်း စက်ပေါ့ပါးအောင်လုပ်နည်း (ဆော့ဝဲမလိုပါ)
ခုတင်ပေးမဲ့ နည်းကတော့ အရမ်းလွယ်ပါတယ် ပုံနဲ တကွရှင်းပြပါ့မယ်...မသိသေးသူတွေအတွက် သီးသန့် သိပြီးသူတွေတော့အော် ဒါလေးများဟင်းးး လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ဟီးးးးးးးး....
၁ . windows +R ကိုနိုပ်ပေးပါ မလုပ်တတ်ရင် start ကိုဝင် ပြီးရင် RUN ကိုနိုပ်
၂ . အဲလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် temp ကိုရိုက်ပြီး ok သို့ မဟုတ် Enter ကိုရိုက်လိုက် အောက်ပုံ ကိုကြည့် ပြီးရင်
၃ . ၀င်းဒိုး လေး ပေါ်လာလိမ့်မယ် အဲထဲမှာရှိတာတွေ အားလုံး ကို Delete လုပ်ပစ်လိုက်ပါ ရဲရဲသာလုပ်ဘာမှမကြောက်နဲ့ 
အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ ပြီးရင် အဲဒီဝင်ဒိုးလေး ကို ပြန်ပိတ်လိုက်တော့ မလိုအပ်တော့ဘူးနောက်ထပ်
၄ . အပေါ်က နံပတ် ၁ အတိုင်း windows +R ကိုနိုပ် လုပ်ပေးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ RUN ဘုတ်မှာ %temp% ကိုရိုက်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် ok သို့Enter ပေါ့ .. ပေါ့ကပုံ အတိုင်း ထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ် အပေါ် နံပတ် ၃ ကအတိုင်း အဲထဲမှာရှိတာတွေ အားလုံး ကို Delete လုပ်ပစ်လိုက်ပါ လုပ်လို့ ပြီးသွားရင်ပိတ်ပစ်လိုက်
၅ .ပြီးရင် Recycle Bin ကိုဖွင့်လိုက်ပါ အထဲမှာရှိနေတာတွေအားလုံးကို Delete လုပ်ပစ်လိုက်ပါ
ပါ ပြီးပါပြီ ၊၊ နေ့ တိုင်းလုပ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေက နေ့ တိုင်းရှိတတ်တယ်လေ ...